बच्चालाई मोबाइल हेर्नबाट कसरी सीमित गर्ने? कति सहज?
सिकागो, संयुक्तराज्य अमेरिका - शनिबारको बिहान।
१० वर्षीय हेनरी हेली उठिसकेका छन्।
उनी पाइजामामै छन् तर उनको माइक्रोफोन जडित हेडफोनमा नीलो बत्ती बल्न थालिसकेको छ। उनी ठूलो स्क्रीनमा बच्चाहरुको लोकप्रिय अनलाइन खेल 'फोर्टनाइट' खेल्न थालिसकेका छन्।
'लौ ? मैले जित्नै लागेको थिएँ, म त मरें,' उनी गस नाम गरेका साथीलाई भन्छन्।
पाँच कक्षाका यी सहपाठी साथी गसको घर हेनरीको भन्दा दुई–चार घर टाढा मात्र छ।
'साथी, मैले हार्नु हुँदैनथ्यो।'
'सम्भवत,' उनी स्वीकार्छन्।
'उसलाई स्क्रीनबाट छुटाएर अरु केही काम लगाउनासाथ एकछिन त उसले रुखो व्यवहार देखाउँछ, फत्फताउँछ,' उनकी आमा बार्ब हेली भन्छिन्, 'ऊ रिसाउँछ, निराश हुन्छ। आमा कति खराब हुनुहुन्छ भन्छ। यो किन, केका लागि गरेको भन्छ।'
एप्पल कम्पनीले आफ्नो पछिल्लो आइफोन सफ्टवेयरमा 'स्क्रीन टाइम' सुविधा थपेको छ। यसले एप्सको प्रयोगको अनुगमन गर्दछ र प्रयोगकर्तालाई वा उनीहरुका अभिभावकलाई एप्स प्रयोगको सीमा तोक्न मद्दत गर्दछ। गूगल फर फेमिलिज र गूगल प्ले तथा अरु धेरै एप्सले पनि अभिभावकलाई त्यस्ता एप्स बारे अनुगमन गर्न तथा कुनै किसिमको नियन्त्रण गर्ने सुविधा प्रयोग गर्नेगरी सेवा दिएका छन्।
'मलाई लाग्दैन उसलाई अनलाइनमा कति समय बिताएँ भन्ने जानकारी छ,' एलेन भन्छन्। त्यसपछि एलेनले कुनै निश्चित घण्टा वाइफाई बन्द गर्ने निर्णय गरे । कुनै चेतावनी नदिई उनले एकरात वाइफाई बन्द गरिदिए।
एक मिनेट, सामाजिक सञ्जालमा एभरेटले कुनै साथीसँग कुरा गर्दै थियो। 'त्यसपछि ऊ बाहिरियो।' यो अन्याय भो भन्दै ऊ बाहिर गयो। बाबुले एभरेटको कुरा सुनिरहे। उनले एभरेटलाई किताब पढ्न वा बाहिर बास्केटबल खेल्न जाऊ भने।
'मैले केही गल्ती त गरेको छैन नि,' एभरेटले पटकपटक भनिरह्यो।
यी प्रवृत्तिका बारेमा अध्ययन गरेका अनुसन्धाताहरु यसलाई 'कुलत' भन्न चाहिँ रुचाउँदैनन्।
तर, 11 संगठनले आफ्नो सूचीमा यस्तो प्रवृत्तिलाई 'गेमिङ हलचल वा गडबडी' भनेको छ। डिजिटल खेलले सम्बन्धहरु, स्कुल र काममा गम्भीर रुपमै व्यवधान ल्याउँछ। अमेरिकी स्वास्थ्य निकायहरुबाट यसका बारेमा अझै पनि अध्ययन नै भइरहेको छ।
'एउटा लक्षणमा प्रायः सधैंजसो स्मार्टफोनको अत्यधिक प्रयोग नै देखिन्छ,' न्यूपोर्ट एकेडेमीका प्रशासक तथा क्लिनिकल सामाजिक कार्यकर्ता हिथर सिनियर मोन्रो भन्छिन्, 'यो नै सबैभन्दा ठूलो समस्याको रुपमा पाइएको छ।'